Ayyaana kana irrattis ulfinni Gooftummaa Kiristoos Ilma Waaqayyoo mul’ateera; Innis cubbuu addunyaa maraa balleessuuf kan aarsaa ta’e Hoolaa Dhugaa (በግዓ ጽድቅ) Waaqayyooti. Kanaafis ayyaanni kun Kiristaanotaa hunda biratti kan kabajameefi kan ol ol jedhe ta’e. Abbaa kabajaa kan ta’e Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin, Cuuphaa Isaatiinis bishaan Inni kabajeen ni qulqullaa’u; qulqulluummaa fudhatanis eeganii yoo jiraatan dhiifama cubbuu isaanii ni argatu.
Kanaafuu wanta hamaa hunda irraa of eegnee baay’ina arjummaa Uumaa keenyaafi Qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos galateeffachuun nurraa eegama; Inni nuuf jecha nama ta’ee cubbuu keenya irraa nu fayyiseeraatii.
Isaaf, arjaa Abbaa Isaafis, Jireenya kan ta’e Afuura Qulqulluu faana kabajni, galatni, sagadniis haa ta’u; har’a, yeroo hundas, bara baraaf. Ameen.